မိုးတိမ်၏ ဘာညာသာရကာ နေကြာ ကွာစိ: September 2007
ယခုအချိန်အထိတော့ ဆန္ဒပြပွဲဟာ အေးအေးချမ်းချမ်းပါပဲ ......
စစ်တွေမြို့က ပြည်သူလူထု တွေအများအပြားပါဝင်လာကြတာကိုကြားရတော့ ၀မ်းသာမိတယ်
အခုဆိုရင် ဆန္ဒပြ သံဃာတွေ ဘုရားရှိခိုးနေပါပြီ . ပြီးရင် ငြိမ်းချမ်းစွာ လူစုခွဲကြမယ်လို့ သိရပါတယ်။
မနက်ဖြန် ၁၀း၃၀ မှာ စတင်လှုပ်ရှားကြမယ်လို့သိရပါတယ်။ ပြည်သူတွေကိုလည်း စည်းရုံးထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းပါ ..
စစ်သားများ အပြည့် တင်ဆောင်ထားသော စစ်ကား ၇ စီး ပြည်လမ်းမပေါ်မှ လှည်းတန်း လမ်းဆုံဘက်သို့ စစ်သီချင်းများ သီဆိုကာ မောင်းနှင် သွားသည်ကို တွေ့ရှိလိုက်ရကြောင်း မျက်မြင်သက်သေ တဦးက မဇ္ဈိမသို့ ပြောပြသည်။
တိုင်းမှူးများက ပစ်မိန့်ကို လက်မခံ
ပိုမိုကြီးထွားလာနေသော ဆန္ဒပြမှုများကို အင်အားသုံး ဖြိုခွင်းရန် စစ်အစိုးရ အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေက လိုလားနေသော်လည်း ရန်ကုန် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး၊ အနောက်မြောက်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူးနှင့် အရှေ့မြောက်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူးတို့ အပါအဝင် တိုင်းမှူးများက လက်မခံဘဲ ပယ်ချထားကြောင်း စစ်အစိုးရနှင့် နီးစပ်သော သတင်းရပ်ကွက်အရ သိရသည်။ မဇ္ဈိမ အနေဖြင့် သီးခြား အတည်ပြုချက်များ ယခုအချိန်အထိ မရနိုင်သေးပါ။
ယနေ့ နေ့လည်က ထပ်မံ သိရှိရသည်က ရန်ကုန်မြို့အတွင်း ဆန္ဒပြသူများကို အရေးယူမည်ဟု ကြေညာထားချက် အပေါ်တွင် စစ်အစိုးရ ထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်များအတွင်း သဘောထား ကွဲလွဲမှု ရှိနေသည်ဟု သိရသည်။
ရေးသားသူ - မိုးတိမ် at 4:49 PM0comments
လောလောဆယ်မှာ ကောလဟာလတွေရော .. သတင်းအမှန်တွေပါ ရောနှောနေပါတယ် ... ခုချိန်ထိတော့ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးမှာ ပစ်ခတ်မှု၊ ဖမ်းဆီးမှုတွေ မရှိသေးပါဘူး ...
အချုပ်ပြောရရင် အခုချိန်အထိ ... လူထုနဲ့ သံဃာတွေဟာ မနေ့ကထက် အင်အားပိုများလာပါတယ်။ အစိုးရကနေ ပစ်မိန့်ပေးမယ်၊ လူတွေကို ဖမ်းဆီးအရေးယူမယ်လို့ သတင်းလွှင့်ထားပေမယ့် အခုချိန်ထိ ချီတက်ပွဲက အေးဆေးပါပဲ။ အခုလူထုတွေဟာ ဆူးလေရှေ့ နဲ့ အမေရိကန် သံရုံးရှိတဲ့ ကုန်သည်လမ်းဘက်ဆီကို ချီတက်သွားပါပြီ။ သံဃာတွေက လိုက်ပါလာတဲ့ ပြည်သူတွေကို အကြမ်းမဖက်ပဲ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြဖို့အတွက် လိုက်လံ ထိန်းကျောင်းပေးနေပါတယ်။ ကိုနစ်နဲ့ ကိုထိုက်တို့ရဲ့ဘလော့ စီဘောက်တွေထဲမှာ လက်ရှိသတင်းတွေကို တိုက်ရိုက်ထုတ်လွင့်ပေးနေပါတယ် .. ဒါပေမယ့် သတင်းအမှားပေးတဲ့ နှောက်ယှက်မှုတွေ ကြုံတွေ့နေရပါတယ် ...
နောက်ဆုံး မဇ္ဈိမ မှ သတင်းကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ..
ခွပ်ဒေါင်းအလံ လွင့်ပျံနေတဲ့ ရန်ကုန်လူထု အုံကြွမှု
မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည် ၃ နာရီ (သတင်းပေးပို့ချိန်)
ခွပ်ဒေါင်းအလံများ လွင့်ပျံနေသော ရန်ကုန် ဆန္ဒပြ လူထုကြီး ဆူးလေ ဘုရားမှသည် ဗိုလ်တထောင် ဘုရားဘက်သို့ ဆက်လက် ချီတက်နေသည်။ သံဃာတော်များက မြို့နယ်အလိုက် လူစုခွဲ စည်းရုံးမှုများလည်း စတင် လုပ်လာသဖြင့် လူအင်အား လျော့နည်းသွားသည်။
ဒီနေ့ကတော့ အဖွဲ့တွေ စုံတယ်ပေါ့နော်။ ဦးပဉ္ဇင်းတွေ ပါတယ်၊ ဆရာလေးတွေပါတယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ပါတယ်၊ သမဂ္ဂအလံ ခွပ်ဒေါင်းအလံနဲ့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ပါတယ်။ အခုဟာက ပြီးတော့ မပြီးသေးဘူး။ လမ်းဆက်လျှောက် သွားကြတယ်။ လူစုမခွဲဘူး။ ဆက်သွားနေတာ။ အခု ဗိုလ်တထောင်ဘက် သွားနေကြတယ်။ လူအင်အားကတော့ ၅ သောင်း၊ ၆ သောင်းလောက် ရှိတယ်။ ဒါက ဘုရားကနေ လာတာပေါ့နော်။ ဒီ မြို့ထဲမှာတော့ အများကြီးပဲဗျ။ ဘေးမှာ ဝိုင်းပြီးတော့ အားပေးတာပေါ့။ ဘုန်းကြီးကတော့ ၆ ထောင်၊ ၇ ထောင် အထက်မှာပဲ ရှိတယ်ဗျ။ နည်းတယ်ရယ်တော့ မဟုတ်ဘူးဗျ။ သူ့ကျောင်း သူ့နေရာမှာရှိတဲ့ ပြည်သူတွေကို လှည့်ခေါ်နေကြတယ်လို့ သိထားတယ်။ ဥပမာ အလုံမှာ ရှိတဲ့ အောင်မင်္ဂလာတိုက်က သံဃာတော်တွေက သူတို့နဲ့ လိုက်ပါအောင် လှည့်အော်နေကြတယ်။ လှိုင်သာယာဘက်မှာလည်း ဘုန်းကြီးတွေက လိုက်အော်နေတယ်။ အမိန့်တွေ ထုတ်လို့ လူတွေ မကြောက်အောင် လိုက်ခေါ်နေတာ။ သူ့မြို့နယ်နဲ့သူ လိုက်ပြီးတော့ စည်းရုံးတဲ့ သဘောပေါ့ဗျာ။
စစ်အစိုးရက ဆန္ဒပြပွဲများ မဖြစ်ပေါ်ရန် ခြိမ်းခြောက်မှုများ လုပ်ထားသော်လည်း ရန်ကုန်လူထု ဆန္ဒပြပွဲကြီးကား ပိုမို ကြီးမားလာပြီး ရက်ပ်သီချင်း အဆိုတော်များ အပါအဝင် အဆိုတော်များ၊ စာရေးဆရာများ၊ ရုပ်ရှင် အနုပညာသည်များလည်း ဆက်လက် ပါဝင်နေပြီး တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များနှင့် လူငယ် ခေါင်းဆောင်များကိုလည်း တွေ့ရသည်။
ဒုတိယနေ့ ဆူးလေတွင် ဆုံမည့် လူထု အုံကြွမှုကြီးတွင် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များလည်း ပါဝင်ပြီး “အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်” ဆိုသော ကြွေးကျော်သံများနှင့် တခဲနက်ညံလျှက် ရှိသည်။ သတင်းယူလျှက်ရှိစဉ်ပင် ကြွေးကျော်သံများ ကြားနေရသည်။
သံဃာ ၅ သောင်းကျော် အထိပင် ရှိနိုင်ပြီး လူထု ၁ သိန်းကျော်မည်ဟု မျက်မြင်သက်သေ အများအပြားက ခန့်မှန်းသော အုံကြွမှုကြီးအနီး လုံခြုံရေးများ မတွေ့ရကြောင်းလည်း သိရသည်။
“၁၃ဝဝ ပြည့်အရေးတော်ပုံ” လိုမျိုး ဖြစ်ပြီဟု အနီးတွင် စောင့်ကြည့်နေသူ တဦးက မဇ္ဈိမသို့ ပြောပြသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင် စစ်အစိုးရက တပ်အင်အားများ တိုးချထားလိုက်ရာတွင် အာဇာနည်ကုန်း၊ ရွှေတိဂုံဘုရား အရှေ့ဘက်မုဉ် ကြေးသွန်းဘုရားတို့တွင် ထပ်တိုးတပ်များကို တွေ့မြင်ရသည်။
ဆူးလေဘုရား အနီးတဝိုက်၊ မြို့တော်ခန်းမ ရှေ့များတွင်လည်း စစ်ဝတ်စုံ အပြည့်နှင့် လုံခြုံရေးများ ပိုတိုးလာသည်။
ဆန္ဒပြသူများကို အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းမည်လား ဆိုသော စိုးရိမ်မှုများ ပေါ်နေသလို သံဃာတော်များကို အကြမ်းဖက်လျှင် ပိုမို မီးထိုးပေးလိုက် သလို ဖြစ်မှာ အာဏာပိုင်တို့ စိုးရိမ်နေကြသည်ဟု အစိုးရနှင့် နီးစပ်သူ အသိုင်းအဝိုင်းက ပြောသည်။
လက်ရှိအနေအထားတွင် စစ်အာဏာပိုင်တို့ဘက်မှ ဆန္ဒပြပွဲများမကြီးထွားရန် ဟန့်တားမှုများကို ကြိုးစားလုပ်နေရကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ရှိ နိုင်ငံ တကာ အေဂျင်စီ တခုမှ လေ့လာသူ တဦးက ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့မှာ ဆန္ဒမပြဖို့ လော်နဲ့အော်
ဆန္ဒမပြရန်နှင့် ဆန္ဒပြလျှင် အရေးယူမည်ဟု ရန်ကုန်မြို့တွင် အသံချဲ့စက်များဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များက လိုက်လံ အော်လျှက် ရှိသည်။
ရေးသားသူ - မိုးတိမ် at 2:48 PM0comments
မနေ့က အခြေအနေအရပ်ရပ်က ကျွန်တော့်ကို မျက်ရည်ဝဲစေခဲ့တယ် ... ကြက်သီးတွေထစေခဲ့တယ် .. အရမ်းလည်း အားရကျေနပ်မိတယ် .... ပါဝင်သူတွေကိုလည်း လေးစားဂုဏ်ယူမိတယ် .. သံဃာ့အာဇာနည် ဘုန်းဘုန်းတွေကိုလည်း ကြည်ညိုမိတယ် ..... ပြီးတော့ ပြည်သူချစ်တဲ့ အနုပညာရှင်ဲ့ ... ပြည်သူတွေကိုလည်းချစ်တဲ့ အနုပညာရှင်တွေဖြစ်တ ကိုဇာဂနာ ... ကိုကျော်သူ ... မထွန်းအိန္ဒြာဗို တို့ကိုလည်း လေးစားမိတယ် ... ဒါမှ ပြည့်သူ့ကိုချစ်တဲ့ အနုပညာရှင်တွေဖြစ်တယ် ကျန်တဲ့ ပြည်သူကို ချစ်တဲ့ အနုပညာရှင်တွေလည်း ပါဝင်ကြမယ်လို့ သတင်းရထားပါတယ် ..... မျိုးချစ်တပ်မတော်နဲ့ ပြည်သူချစ် အနုပညာရှင်တွေကို ပြည်သူတွေ မျှော်နေကြပါတယ်လို့ ပြောပေးကြပါ .... ပြည်သူကိုချစ်တဲ့အနုပညာရှင်တွေဟာ ပြည်သူတွေအတွက် အားအင်တစ်ခုပါပဲ.... ပါဝင်လှုပ်ရှားသူအားလုံး ဘေးအန္တာရာယ်ကင်းရှင်းပြီး ရည်မှန်းချက် ပိန်းတိုင်ကို အရောက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ် ....
ရေးသားသူ - မိုးတိမ် at 11:16 AM0comments
စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ်။
"အေး- အဲဒါဆို သူ့ကို ဖမ်းလိုက်။"
ရေးသားသူ - မိုးတိမ် at 10:14 AM0comments
ဆူးလေဘုရား လမ်းပေါ်တွင် စုရုံး ဆန္ဒပြနေသူ လူသောင်းပေါင်း များစွာသော ဆန္ဒပြ လူထုကြီးသည် ဗိုလ်တထောင် ဘုရားဘက် ရွှေ့သွားနေ သည်။ မျက်မြင်များ အဆိုအရ လူတသိန်းကျော်အထိ ရှိနိုင်မည်ဟု သိရသည်။
မြန်မာစံတော်ချိန် ၃ နာရီခွဲ
လူ ၅ သောင်းပါ ရန်ကုန်ဆန္ဒပြ စစ်ကြောင်းတခုသည် လှည်းတန်း လမ်းဆုံမှသည် ကမ္ဘာအေး ဘုရားဘက်သို့ ချီတက်သွားနေရာ ပြည်လမ်း ၆ မိုင်ခွဲကို မကြာမီက ဖြတ်သွားကြောင်း လိုက်လံ ကြည့်ရှုနေသူ တဦးက ပြောသည်။
Sittwe, Arakan State,2p.m.—About 20,000 monks led an estimated 100,000 civilians from all over Sittwe Township in Arakan state inapeaceful demonstration around the city at about 2:00 p.m. on Monday, according to witnesses who were involved in the protest. The monks chanted the metta sutta (the Buddha’s words on loving kindness) and witnesses said that all classes of people—such as farmers, workers and students—also joined the march. The demonstrators were demandingareduction in the price of fuel and basic commodities. “There have been no disturbances so far,” the witnesses said.
Shwebo, Sagaing Division, 1 p.m.—About 80 monks in Shwebo Township in Sagaing Division participated inapeaceful demonstration at about 1 p.m., chanting the metta sutta (the Buddha’s words on loving kindness), according to an eyewitness. Members of the public offered water and food to the monks during the march.
Bamaw, Kachin State, 8 a.m.—About 270 monks in Bamaw Township in Kachin State stagedapeaceful demonstration on Monday from about6a.m. to 8 a.m. and recited the metta sutta (the Buddha’s words on loving kindness), according toamonk who was involved in the protest. The monks at the front of the march held Buddhist flags and three alms bowls were turned upside-down, said the monk. Authorities closely followed the protest and security has been beefed up since Sunday, he said.
ရေးသားသူ - မိုးတိမ် at 4:10 PM0comments
မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရှိသော ဘာသာဝင်များအားလုံး သတိထားပါ။
ဘာသာရေးအဓိကရုန်းဖြစ်ရန် နအဖမှ ယုတ်မာစွာ ကြံစည်နေသည်ဟု ပြည်သူဘက်ကိုလိုက်လိုသော ကြံ့ဖွတ် အချို့မှ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအား သတင်းပေးထားပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရှိသော ဘာသာဝင်များအားလုံး သတိထားပါ။
ရေးသားသူ - မိုးတိမ် at 11:51 AM0comments
ကျွန်တော် ခုတစ်လော အလုပ်တွေမအားတာနဲ့ မတင်ဖြစ်ဘူး … ပြောတော့မယ် .. ဒီလူကြီးအမြဲ အလုပ်ရှုပ်နေပါလားလို့ .. ဟုတ်တယ်ဗျာ … မြန်မာနိုင်ငံမှာက တစ်ရက်လုပ်မှ တစ်ရက်စားရတာ …. အလုပ်ရှုပ်နေမှ တော်ရုံကျတာဗျာ …… ဟီး
ဟိုတစ်လောက ပင့်ဂိုလ်းရဲ့ ပိုစ့်တစ်ခုကို ဖတ်လိုက်မယ်တယ် ….. ဆေးပညာရှုထောင့်ကနေ တင်ပြထားတာမို့ အရမ်းကောင်းတယ် .. ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီအတိုင်းတာ မြန်မာပြည်မှာ ကျင့်သုံးရင် ပါးတွေ ကျွတ်ကျွတ်ကျိုးသွားနိုင်တယ် .. ဟီး
ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်မှာလည်း ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေရှိပါသေးတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ နွေးထွေးတဲ့အပြုံးတွေနဲ့ လူတွေကို ထွေးပိုက်ပါ။ သင်ကော နွေးထွေးစွာပြုံး တတ်ပါသလားလို့ အရင်မေးကြည့်ချင်တယ်။ နွေးထွေးစွာပြုံးတယ်ဆိုတာ လူတွေအဖို့ အမှတ်တမဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပါ။ ရင်ထဲမှာ ကျေနပ်မှုတစ်ခုကိုရလိုက်ပြီဆိုရင် အလိုလိုနေရင်း ပြုံးတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကြောင်းအရာမဲ့ ပြုံးတတ်ဖို့ဆိုတာ တစ်ကယ်ခက်တယ်။ မပီပင်ရင် မဲ့ပြုံးကြီးဖြစ်သွားရော။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ပီပီပြင်ပြင်မပြုံးတတ်သေးပါဘူး။ ကြိုးစားနေတုန်းရှိပါသေးတယ်။ သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကို နွေးထွေးစွာပြုံးပြခြင်းဟာ သင်ဟာသူ့အပေါ်မှာ ကျေနပ်မှုလေးတစ်ခု ဖြစ်စေတယ်လို့ ခံစားမိစေမှာပါ။ အပြုံးရဲ့တန်ခိုးဟာ အစွမ်းထက်လှပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ကိုသင် မှန်ကြည့်ပြီး နွေးထွေးစွာပြုံးတတ်ဖို့ကြိုးစားပါ။ နွေးထွေးစွာပြုံးတတ်ပြီဆိုရင် သင့်အလုပ်အကိုင်မှာ၊ လုပ်ငန်းမှာ၊ မိတ်ဆွေတွေကြားထဲမှာ အောင်မြင်မှု တစ်ဝက်ကို ရယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် စားအုပ်တွေထဲမှာ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ ပြီးတော့ အပြုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သာဓကတစ်ခုအနေနဲ့ ဆရာဖေမြင့် ဘာသာပြန်တဲ့ နှလုံးသားအဟာရထဲက “ထိုအပြုံး” ၀တ္တုတိုလေး တစ်ပုဒ်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်။
ပြင်သစ်စာရေးဆရာ အန်တွိုင်း ဆန်တက်ဇူပေရီ၏ ``မင်းသားလေး´´ (The Little Prince) ၀တ္တုကို စာသမား အတော်များများ သိကြပါသည်။ ကလေးများအတွက် နှစ်ခြိုက်ဖွယ် ပုံပြင်တစ်ပုဒ် ဖြစ်သကဲ့သို့ လူကြီးများအတွက် အတွေးပွားစေသော စာတစ်အုပ်လည်းဖြစ်ကြောင်း ဖတ်မိသူတို့ လေးစားသိမှတ်ခဲ့ကြပါသည်။
``မင်းသားလေး´´ကို သိသော်လည်း ဆန်းတက်ဇူပေးရီ၏ အခြား ၀တ္တုတို-ရှည်များကိုကား သိသူ နည်းလှပါသည်။
ဆန်တက် ဇူပေရီသည် တိုက်လေယာဉ်မှူးတစ်ယောက် ဖြစ်၍ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း နာဇီတို့နှင့် တိုက်ခိုက်စဉ် ကျဆုံးသွားခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်မတိုင်မီကလည်း သူသည် စပိန် ပြည်တွင်းစစ်တွင် ဖက်ဆစ်များအား ဆန့်ကျင်သည့်ဘက်က ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး ယင်းစစ်ပွဲကာလ သူ့အတွေ့အကြုံတစ်ရပ်ကို မူတည်၍ ``ထိုအပြုံး´´ (The Smile) အမည်ရှိ ၀တ္တုတစ်ပုဒ် ရေးခဲ့သည်။ ၄င်းဝတ္တုလေးအကြောင်း ကျွန်တော် ယခုပြောလိုပါသည်။ ``ထိုအပြုံး´´ကို သူသည် ကိုယ့်တွေ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုအနေဖြင့် ရေးသည်လား၊ ၀တ္တုတစ်ပုဒ် အဖြစ် ဖန်တီးခဲ့ခြင်းလား ကျွန်တော်မခွဲခြားတတ်ပါ။ သို့သော် ဖြစ်ရပ်မှန် ဟူ၍ပဲ ကျွန်တော် ယူခဲ့ပါသည်။
သူ့အား ရန်သူတို့ ဖမ်းမိသွားပြီး အချုပ်ခန်းတစ်ခုထဲ ထည့်ထားလိုက်ကြောင်း၊ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင် သူတို့၏ စက်ဆုပ်မုန်းတီးပုံရသောအကြည့်နှင့် ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ဆက်ဆံပုံများအရ နောက်နေ့မှာတော့ သူ့အားသတ်မှာမုချဟု သူယူဆကြောင်း ရေးပါသည်။
သည့်နောက် သူဆက်လက်ရေးသားပုံကို ကျွန်တော်မှတ်မိသလို ပြန်ပြေပြပါမည်။
``ငါ့ကို သတ်ကြတော့မှာ မုချဟု ကျွန်တော်သိနေပြီ၊ လူကအကြီးအကျယ် တုန်လှုပ်ချောက်ချားကာ ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိ ဖြစ်လာသည်။ အိတ်တွေထဲ လျှောက်နှိုက်ကာ စီးကရက် တစ်လိပ်တစ်လေများ သူတို့ရှာတုးက မတွေ့ဘဲ ကျန်ရစ်လေမည်လားဟု စမ်းကြည့်မိသည်။ ကံအးလျှော်စွာ တစ်လိပ်ရသည်။ သို့သော် လက်တွေ အကြီးအကျယ်တုန်နေသဖြင့် စီးကရက်ကို နှုတ်ခမ်းမှာပင် ကောင်းစွာ တပ်၍ မရချင်။ ဆေးလိပ်ရပြန်တော့ မီးခြစ်ကလိုလာပြန်သည်။ မီးခြစ်လည်းသူတို့ ယူသွားသဖြင့် မရှိတော့။
``ကျွန်တော့်အား စောင့်ကြည့်နေသူကို သံတိုင်ကြားမှနေ၍ ကြည့်မိသည်။ သူက ကျွန်တော်နှင့်မျက်လုံးချင်းမဆိုင်။ သေလူတစ်ယောက်နှင့် ဘယ်သူမျက်လုံးဆိုင်ချင်မည်လဲ။ ``မီးခြစ်ရှိရင် တစ်ဆိတ်လောက်ဗျာ´´ ကျွန်တော်လှမ်း၍ ပြောလိုက်သည်။ သူကျွန်တော့်ကို လှမ်းကြည့်ပြီး ပခုံးတစ်ချက်တွန့်ကာ စီးကရက်မီးညှိပေးနေစဉ် အမှတ်မထင် သူနှင့်ကျွန်တော် မျက်လုံးချင်းဆိုင်မိသည်။ အဲသည်အခိုက် ကျွန်တော် ပြုံးပြလိုက်သည်။ ဘာကြောင့် ပြုံးပြမိသလဲ ကျွန်တော့်ဘာသာမသိ။ ကျွန်တော် စိတ်ဂနာမငြိမ် ဖြစ်နေတာကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါမှမဟုတ် လူတစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် အဲသည်လောက် နီးကပ်နေသည့်အခါမျိုးမှာ ပြုံးမပြ၍ မနေနိုင်တာလား မပြောတတ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်ကတော့ ပြုံးပြလိုက်မိသည်။ အဲ့သည့်အခိုက်အတန့်မှာ သူ့နှလုံးသားနှင့် ကျွန်တော့်နှလုံးသားကြား တစ်နည်းပြောရသော် ကျွန်တော်တို့ လူသားဝိညာဉ်နှစ်ခုအကြား လျှပ်စစ်ဝါယာနှစ်ခု ပူးမိသည့်အခါမှာ ဖြစ်သလို မီးပွားတစ်ခု ခုန်ကူးသွားသည်ဟု ထင်လိုက်ရသည်။ သူ့မှာ နဂိုမူလက ကျွန်တော့်အား ပြန်လည်ပြုံးပြရန် ဆန္ဒမရှိဆိုတာ ကျွန်တော်သိသည်။ သို့သော် ကျွန်တော့်အပြုံးက သံတိုင်းများကြားမှနေ၍ သူထံခုန်ကူးသွားပြီး သည့်နောက်တွင် သူ့နှုတ်ခမ်းပေါ်၌လည်း အပြုံးတစ်ခု ပေါ်လာသည်။ သူက ကျွန်တော့်စီးကရပ်ကို မီးညှိပေးပြီးနောက် အနားမှမခွာသေးဘဲ ကျွန်တော့်မျက်လုံးများကို စူးစိုက်စွာပင်ကြည့်ကာ ပြုံး၍နေသည်။
``ကျွန်တော်လည်း သူ့ကို ဆက်၍ ပြုံးကြည့်နေသည်။ သူသည် အချုပ်ထောင်စောင့် တစ်ယေက်မဟုတ်တော့၊ သူ့ကို လူတစ်ယောက်အဖြစ် ကျွန်တော်မြင်နေပြီ၊ ကျွန်တော့်ကို သူကြည့်ရှုပုံကလည်း အဓိပ္ပါယ်သစ်တွေ ပါလာပြီ၊ ``ခင်ဗျားမှာ သားသမီးရှိလား´´သူက မေးသည်။
``ရှိပါတယ်ခင်ဗျား၊ ဟောဒီမှာ ဟောဒီမှာ ကျွန်တော် ပျာပျာသလဲ ပိုက်ဆံအိတ်ကို ဖွင့်ကာ ကျွန်တော့်မိသားစု ဓါတ်ပုံကို ထုတ်ယူပြီး သူ့အားပြသည်။ သူသည်လည်း သူ့ကလေးများ ဓါတ်ပုံတွေ ထုတ်လာကာ သည်ကလေးတွေနှင့်ပတ်သက်သည့် သူ့အစီအစဉ်များ၊ စိတ်ကူးများ၊ သူတို့အတွက် မျှော်မှန်းထားသည့်သည်များကို ပြေပြနေသည်။ တဖြည်းဖြည်း ကျွန်တော့်မျက်လုံးထဲမှာ မျက်ရည်တွေ အိုင်လာသည်။ ကျွန်တော့်မိသားစုကို ကျွန်တော်မတွေ့ရတော့မှာ စိးရိမ်ထိန့်လန့်လှကြောင်း၊ သည်ကလေးတွေ ကြီးပြင်းအောင် စောင့်ရှောက်နိုင်ခွင့် မရှိတော့မှာ ပူပန်နေသည့် အကြောင်းများ ကျွန်တော်ပြောမိသည်။ ကျွန်တော့်စကားတွေ နားထောင်ရင်း သူ့မျက်လုံးများမှာလည်း မျက်ရည်တွေ ရစ်ဝဲလာသည်။
``သည့်နောက်မူ ဘာစကား တစ်ခွန်းမျှ မပြောဘဲသူက ရုတ်တရက် ကျွန်တော့်အချုပ်ခန်းတံခါးသော့ကို ဖွင့်ကာ ကျွန်တော့်ကိုအပြင်ထုတ်သည်။ အချုပ်ထောင်ပြင် ရောက်လာပြီးနောက် လမ်းကြိုလမ်းကြားများအကြား တိတ်ဆိတ်စွာပင် ဖြတ်သန်းခေါ်ဆောင်လာပြီး မြို့စွန်းနား ရောက်သည့်အခါ ကျွန်တော့်ကို လွှတ်ပေးလိုက်သည်။ ထို့နောက်း နှုတ်ဆက်စကားတွေ ဘာတွေလည်း ပြောမနေတော့ဘဲ မြို့ဘက်ဆီ သူလှည့်ပြန်သွားသည်။
``ကျွန်တော့်အသက်ကို အပြုံးတစ်ခုက ကယ်ဆယ်လိုက်ခြင်းပေတည်း´´
မှန်သည်။ ဟန်ဆောင်မှု ကင်းသော ကြိုတင်ကြံရွယ်ချက်မပါသော ပင်ကို သဘာဝအပြုံး၊ သို့မဟုတ် လူနှစ်ဦးအကြား အရိုးသားအပွင့်လင်းဆုံး ပေါင်းကူးဆက်သွယ်မှု။
ဆန်တက်ဆူပေရီ၏ သည်ဝတ္တုလေးကို အလုပ်ခွင်မှာ ကျွန်တော်ပြောပြလေ့ရှိသည်။ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကျွန်တော်တို့တတွေမှာ ဂုဏ်သိက္ခာတွေ၊ ဘွဲ့ထူး ဂုဏ်ထူး ရာထူးအဆင့်အတန်းတွေ၊ ကိုယ့်ကိုအများက ဘယ်လိုမြင်စေချင်သည်ဟူသော ကိုယ်ပိုင်သတ်မှတ်ချက်တွေ အလွှာလွှာ အထပ်ထပ်ဖုံးကာ ကိုယ်ကိုယ်ကိုကွယ်ကာထားကြသည်။ သို့သော် ဘာတွေ ဘယ်လိုဖုံးဖုံး အောက်ဆုံးမှာတော့ တကယ့် လူပုဂ္ဂိုလ်အစစ်အမှန်က ရှိနေသည်ဆိုတာ သိကြမြင်ကြစေလို၍ပဲဖြစ်သည်။
အဲ့သည် အတွင်းပိုင်း အနက်အရှိုင်းထဲက အရာကို ၀ိညာဉ်ဟုပဲ ကျွန်တော်ဆိုလိုလိုက်မည်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တွင်းက အဲ့သည်ဝိညာဉ်ဟု ကျွန်တော်အမည်ပေးလိုက်သော အစိတ်အပိုင်းနှင့် သင့်ကိုယ်တွင်းက အလားတူအစိတ်အပိုင်းတို့ အပြန်အလန် သိကျွမ်းသွား ကြပြီဆိုလျှင် ကျွန်တော်ဘယ်နည်းနှင့်မျှ ရန်သူတွေမဖြစ်နိုင်ကြတော့။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် မမုန်းတီးနိုင်၊ မနာလိုဝန်တိုမဖြစ်နိုင်၊ ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခြင်းလည်း မရှိနိုင်တော့။
ယခုတော့ ကျွန်တော်တို့ တစ်သက်လုံးကြိုးစား တည်ဆောက်ထားကြသည့် အလွှာအထပ်တွေ ရစ်ပတ် ဖုံးကွယ်နေသည့်အတွက် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် အစစ်အမှန် မတွေ့ဆုံနိုင်ကြဘဲ ရှိနေသည်။ ဆန်တက်ဆူပေရီ၏ ၀တ္တုက ၀ိညာဉ်နှစ်ခုအပြန်အလှန် တွေ့ထိ သိမြင်သွားကြသည့် ထူးခြားသော အခိုက်အတန့်လေးအကြောင်း ရေးဖွဲ့ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အဲသည်လို အခိုက်အတန့်တချို့တော့ ကြုံဖူးပါသည်။ ဥပမာ တစ်ခုပြောရလျှင် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ရုတ်တရက် ချစ်ကျွမ်းဝင်သွားမိခြင်းမျိုး ဆိုပါစို့။
နို့စို့အရွယ် ကလေးငယ်များနှင့်တွေ့ရသည့်အခါမျိုးမှာလည်း အလားတူဖြစ်မိတတ်သည်။ သည်လိုကလေးငယ်မျိုးကို တွေ့ရသည့်အခါ ကျွန်တော်တို့ ဘာကြောင့်ပြုံးမိတတ်ကြသလဲ။
အပေါ်ယံလွှာ တစ်ခုမျှ ကွယ်ကာထားခြင်းမရှိသူ တစ်ဦးကိုတွေ့မြင်လိုက်ရ၍လား။ သူ၏ အပြုံးမှာ ဟန်ဆောင်မှု အကင်းဆုံးအပြုံး၊ အစစ်မှန်ဆုံး အပြုံးဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော်တို့ သိနေကြ၍လား။ ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော်တို့ရင်ထဲရှိ ငယ်ဝိညာဉ်က ရွယ်တူချင်းချင်း သိကျွမ်းခင်မင်ကာ နှစ်လိုအားရစွာ ပြုံးလိုက်မိခြင်းလား။
[မူရင်း ။ Hanoch MaCarty ၏ The Smile]
ဘာသာပြန် ။ ဖေမြင့်
ရေးသားသူ - မိုးတိမ် at 11:38 AM0comments